Qodobada Bill Ingiriisi ee Martech Zone |
Maqaallada by Bill Ingiriisi
Biil (@abdulahi_muuse) waa madaxa naqshadeynta at Wax barasho oo wuxuu farshaxanka ku samaynayay kombuyuutarrada ilaa maalintii Amiga 500. Internetka iyo shabakadda shabakadda ayaa u oggolaatay inuu ugu dambayn isku daro danaha nolosha oo dhan xagga naqshadeynta garaafka iyo farshaxanka isdaba jooga ah ee uu ku soo jiito farsamada iyo barnaamijyada. Waxyaabaha hiwaayadaha ah ee Bill waxaa ka mid ah majaajilooyinka 'Marvel', 'Guitar Hero', iyo daawashada barnaamijyada ku saabsan filimada. Inta badan kalfadhiyadiisa naqshadeynta waxaa shidaal ku qaatay qaddar fara badan oo ah Diet Coke. Wuxuu hadda ku nool yahay Westfield, IN, xaaskiisa cajiibka ah, Nicole, iyo wiil la mid ah oo la yaab leh, Van.
Afar Tilmaamood oo ku Saabsan Mawduuca Websaydhka La Akhrin karo
Jimco, Febraayo 19, 2010 Axad, Juun 28, 2015 Bill Ingiriisi
Akhrisku waa kartida uu qofku u aqrin karo tuduca qoraalka oo uu ku fahmi karo kuna xasuusan karo waxa uu hada akhriyay. Halkan waxaa ku yaal tilmaamo ku saabsan hagaajinta akhriska, soo bandhigida, iyo muujinta qoraalkaaga bogga. 1. Wax ugu qor Akhriska Webka ma sahlana. Kormeerayaasha kumbuyuutarku waxay leeyihiin qaraar hoose oo shaashad ah, iftiinkooda la saadaaliyayna wuxuu si dhakhso leh indhahayaga uga daalaa. Waxaa intaa dheer, degello badan iyo codsiyo ayaa dadku dhiseen
Arbacada, Janaayo 20, 2010 Khamiis, May 14, 2015 Bill Ingiriisi
Haddii aad wax u qorto baloog, maareyso degel, ama aad u dirto codsiyada isku xirka bulshada sida Facebook ama Twitter, sawir qaadistu waxay u badan tahay inay qayb muhiim ah ka tahay qulqulkaaga. Waxa laga yaabo inaadan ogeyn waa inaysan jirin qormooyin sawir gacmeed ah ama qaab muuqaal ah oo ka samaysan kara sawir diirran. Dhinaca kale, sawir fiiqan oo cad ayaa hagaajin doona dadka isticmaala? aragtidaada ka kooban waxyaabahaaga iyo hagaajinta muuqaalka guud iyo dareenkaaga